တင်းမာမှုခေါင်းကိုက်ခြင်းမှသက်သာရာရစေရန်မည်သို့ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သဘာဝကကုစား "တင်းမာမှုခေါင်းကိုက်ခြင်းမှသက်သာရာရစေရန်မည်သို့ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
တင်းမာမှုခေါင်းကိုက်ခြင်းမှသက်သာရာရစေရန်မည်သို့ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
သင်တစ်ဦးပြင်းထန်ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်အတူအလုပ်ရှုပ်နေနေ့ကအပြီးအိမ်ပြန်ဘယ်နှစ်ယောက်ကြိမ်ပြန်ရောက်ပြီလော အလုပ်များတဲ့သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးမှုရှိမရှိကို left တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုနာကျင်မှုအိပ်ရာမယ့်ရင်ဆိုင်ရ သငျသညျသဘာဝကကုစားမှသက်သာရာရစေရန် 8 ဤဆောငျးပါးတှငျတှေ့ရလိမျ့မညျ တင်းမာမှုခေါင်းကိုက်ခြင်း.
တစ်ဦးကတင်းမာမှုခေါင်းကိုက်များသောအားဖြင့်ဦးခေါင်းပတ်ပတ်လည်တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာတီးဝိုင်းရှိခြင်း၏ခံစားချက်အဖြစ်ဖော်ပြနေသည်။ သငျသညျစဉ်ဆက်မပြတ်နာကျင်မှု, Non-pulsatile ခံစားရသည်။ ထိုအခါနဖူးနှင့်ဘုရားကျောင်း, နှင့်ဦးရေပြား, လည်ပင်းနှင့်ပခုံးအတွင်းတင်းမာမှုအပေါ်တစ်ဦးဖိအား။
ဒီဘုံအခြေအနေအတိအကျကိုအကြောင်းတရားများလူသိများကြသည်မဟုတ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကျနော်တို့ထင် စိတ်ဖိစီးမှု အဓိကခလုတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်မတူဘဲဤခေါင်းကိုက်များသောအားဖြင့်အမြင်အာရုံနှောင့်အယှက်နဲ့ဆက်စပ်ကြသည်မဟုတ်, အော်ကလီဆန်ခြင်း သို့မဟုတ်အန်။
အဆိုပါတင်းမာမှုခေါင်းကိုက် Episode သို့မဟုတ်နာတာရှည်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာတစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်မှ 30 မိနစ်ကနေကြာရှည်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်မကြာခဏအခြေခံပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်း Episode တင်းမာမှုခေါင်းကိုက်နာတာရှည်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Les ဝဒေနာ 15 လကျော်ကာလအတွင်းတစ်လလျှင်3ရက်ပေါင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်ပါတယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့တင်းမာမှုခေါင်းကိုက်ခြင်းမှသက်သာရာရစေရန်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်မြဲဖြစ်ပါသည်နှင့် / သို့မဟုတ်သင့်နေ့စဉ်ဘဝအပေါ်သက်ရောက်မှုလျှင်သင်ထို့နောက်သင့်ဆရာဝန်ကိုတွေ့မြင်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ တစ်ဦးခေါင်းကိုက်ခြင်းလည်းအခြားအကိုပိုမိုလေးနက်မမှန်တစ်ခုညွှန်ပြချက်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ခေါင်းကိုက်ဖို့နှိုးစက်နာရီများအတွက်4အကြောင်းရင်းများ
ဤအခေါင်းကိုက်ဆက်ဆံဖို့မျိုးစုံ pharmacological ကုထုံးယခုရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီရောဂါသက်သာရာနိုင်သောသဘာဝကကုစားလည်းရှိပါတယ်။
1 ။ ပြုတ်ရည်ဂျင်း
စက်ရုံ၏ကျဉ်းမြောင်းသွယ်လျ Anti-inflammatory နဲ့ analgesic ဂုဏ်သတ္တိများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ပြုတ်ရည်ဂျင်းခေါင်းကိုက်သက်သာပေမယ့်မသာ ဒါကြောင့်လည်းခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်အတွက်ပျို့ကိုထိန်းချုပ်ပေးနိုင်သည်။
2 ။ chamomile ၏ပြုတ်ရည်
တစ်ဦးက chamomile လက်ဖက်ရည်လည်းတင်းမာမှုခေါင်းကိုက်သက်သာနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်စက်ရုံရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်anxiétလျော့ချသော Components ကြွယ်ဝဖြစ်ပါသည်ed ။ အနားယူရန်နှင့်တင်းမာမှုခေါင်းကိုက်ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ် chamomile တစ်ခွက်ကိုရှိသည်။
သင်သိလား chamomile ၏6ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများ ?
3 ။ မျက်စိအဘို့အ Mint, mask
စုစည်းပူစီနံတစ်ခုပြုတ်ရည်ကိုပြင်နှင့် 20 မိနစ်အတွင်းမျက်ခမ်းမှ compression အတူကသက်ဆိုင်ပါသည်။ ဤသည်ကိုးကွယ်ရာခေါင်းကိုက်သက်သာရာအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ် ကြွက်သားတွေဖြေလျော့ မျက်လုံး။
4 ။ cider ရှလကာရည်နှင့်အတူ mask
ဤသည်မျက်နှာဖုံး analgesic သတ္တိလည်းရှိတယ်။ အအေး cider ရှလကာရည်စိမ် compression မေးပါ သငျတို့သနာကျင်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့လိမ့်မည်။
5 ။ လာဗင်ဒါ
ပြုတ်ရည်သို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာရေနံ၌, la လာဗင်ဒါ , ခေါင်းကိုက်သက်သာရာတစ်ရှူးများ၏désenflammerနှင့်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်အပေါ်ပြုမူနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က၎င်း၏လိမ်းအသုံးပြုမှုကိုအကြံပြုပါသည်။
အခုဆိုရင်သင်တင်းမာမှုခေါင်းကိုခေါင်းကိုက်သက်သာဖို့ကွဲပြားခြားနားသောသဘာဝအလျောက်ကုစားငါသိ၏။ သို့သော်ဤကုသမှုထက်ကျော်လွန်သင်သိရ အရည်အသွေးအအိပ်စက်ခြင်း, ကျန်းမာသောအစားအစာနှင့် ယောဂ သို့မဟုတ်တရားအားထုတ် သင်သည်သင်၏စိတ်ဖိစီးမှုစီမံခန့်ခွဲနှင့်ဤရောဂါတားဆီးကူညီပေးပါမည်။
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ဆန့်ကျင်6သဘာဝကကုစား
ဤသည်ကိုယုံကြည်ရန်ခက်ခဲပုံပေါ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူကတစ်ဦးကိုကုသဖြည့်စွက်နိုင်သည့်သဘာဝကကုစားနှင့်အတူခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်သက်သာရာမှဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Read more »
သံချို့တဲ့သွေးအားနည်း: သဘာဝအလျောက်ကုစား5အတူကပြုမူဆက်ဆံ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ